Vondrombahoaka : nitombo 58% ny fidiram-bola | NewsMada
“Raha 30 % ny fitomboan’ny fidiram-bola neritreretina ho azo, nahavita hatrany amin’ny 58 % ny vokatry ny asa”, hoy ny ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Rasolomaholy Rakotozanany Célestin, momba ny fivoriana atrikasa teny Anosy, omaly, nanaovana tomban’ezaka ny amin’ny fampidiram-bola eny anivon’ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana tamin’ny zato andro (RRI) andiany faharoa.
Hitarina izany ezaka fampidiram-bola izany, araka ny fanazavany. Hampitomboana avo roa heny ny isan’ny kaominina hanaovana ny ezaka, izany hoe ho 232. Nanaovana ezaka ny faritra 22. Hoezahina koa ny karazana fampidiram-bola: betsaka ny tamberim-bidy teo, hanaovana ezaka ny hetran-trano sy ny hetran-tany.
Tsy azo antenaina hatrany ny vola avy amin’ny fanjakana foibe
Ampiasaina amin’ny fananganana fotodrafitrasa sy fampandehanan-draharraha ny vola miditra. Hamafisin’ny mpiasam-panjakana ny fomba fiasany, ampitomboana ny asa atao sy vita. Tsy afa-kanantena vola avy amin’ny fanjakana foibe hatrany ny vondrombahoaka itsinjaram-pahefana, fa tsy maintsy manao ezaka ho fidiram-bola.
Miara-miasa ny minisitera roa tonta: ny Atitany, manetsiketsika ny préfet, ny lehiben’ny distrika, ny lehiben’ny boriborintany… Rehefa mandeha ny ezaka, mitahiry ny vola ny mpiasan’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola. Mila tsinjaraina ny vola na tafiditra any amin’ny kaontin’ny faritra na ny kaominina aza, araka ny fanazavany. Manao ny fitantanana ny vola ny mpiasan’ny Tahirim-bolam-panjakana.
Miantraika amin’ny vahoaka ny vokatry ny asa amin’izany?